ဓာတ်ငွေ့ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆန့်ထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ ပစ္စည်းသစ်
အပူစွမ်းအင်ကနေ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကို ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ ပစ္စည်းသစ်တစ်မျိုးက တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ဓာတ်ငွေ့ တစ်ဂါလံ အသုံးပြုမှုရဲ့ စွမ်းရည် အမြင့်ဆုံး ရရှီနိုင်စေဖို့ အထောက်အကူ ပြုလာလိမ့်မယ် လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံက သုတေသီတွေက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်တယ်။ ယာဉ်ရွေ့လျားနိုင်ဖို့နဲ့ ရေဒီယိုလို၊ ရေသုတ်တံလို ကိရိယာတွေ အတွက် ပုံသေ ဓာတ်ဆီနဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ အင်ဂျင် တစ်လုံးက ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ရဲ့ 25 ရာနှုံးလောက်ကိုပဲ အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ စွမ်းအင် အများအပြားကတော့ အိပ်ဇောပိုက်ကနေ ဆုံးရှုံး ကုန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ ပစ္စည်းထက် ကောင်းတဲ့ အပူကနေ လျှပ်စစ်ပြောင်း ကိရိယာနဲ့ဆိုရင် ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ စွမ်းအင် အချို့ အ၀က်ကို ပြန်လည် သုံးစွဲနိုင်မယ်လို့ ပါဆာဒီးနားက ကားလ်တက်နဲ့ ကိုလံဘတ်စ်မှာရှိတဲ့ အိုဟိုင်းယိုးတက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေက တွက်ဆကြပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းက အလုပ်တွေ အားလုံး လုပ်နိုင်တယ်ဗျ။ ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်၊ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင် တွေလို သမားရိုးကျ အင်ဂျင်တွေလိုပဲ သူက လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ လျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာတွေဆီကို ပြောင်းပေးရာ မှာတော့ သူက ရေနွေးငွေ့နဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေနေရာမှာ အီလက်ထရွန်တွေကို အစားထိုး အသုံးပြုတယ်။ ပြီးတာနဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် တိုက်ရိုက် ထုတ်ပေးတာပဲ လို့ ပရောဂျက် ခေါင်းဆောင် ဂျိုးဇက် ဟာရီမန်စ်က ပြောတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြတယ်။
ဒီပရောဂျက်မှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်တဲ့ ကားလ်တက် က ဂျက်ဖ် ဆနိုက်ဒါ ကလည်း အပူကနေ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ပြောင်းတဲ့ ဒီ ကိရိယာဟာ မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ လောင်စာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 10 ရာခိုင်နှုံးအထိ တိုးလာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နာဆာရဲ့ ဂျက်အင်ဂျင် လည်ပတ်စနစ် သုတေသန လုပ်ငန်းမှာ အစောပိုင်း ကတည်းက အလားတူ ပစ္စည်းမျိုး ထုတ်ဖို့ စိုင်းပြင်းခဲ့တဲ့ ဆနိုက်ဒါ ကတည်း ပြောပါတယ်။ ခုလိုမျိုး ပစ္စည်း ထုတ်ဖို့ အကြံအစဉ် ရှိနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရေနံ တစ်စည် ဒေါ်လာ 20 လောက် ဖြစ်နေစဉ်က ဒီ အကြံအစဉ်ကို ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်တစား မရှိကြပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
ခု စွမ်းအင်ဈေးက ငါးဆလောက် ခုန်တက်သွားတဲ့ခါကျမှ စောစောက ရှိနှင့်နေတဲ့ ခုလို အစားထိုး နည်းပညာဟာ ပိုပြီး အသုံးတည့်လာတဲ့ သဘောပါပဲ လို့ ဆနိုက်ဒါက သူနဲ့ တယ်လီဖုန်း အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို နောက်5နှစ်ကနေ 10 နှစ်အတွင်း လက်တွေ့ အသုံးပြုလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သူက ယုံကြည်နေပါတယ်။ တကယ် လက်တွေ့ သုံးစွဲလာနိုင်မှုက ဒီစနစ် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ စွမ်းအင်ဈေးကွက် အပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အရေအတွက် အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစံနစ်ကို အမေရိကန် 10 ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ဒီထက် နည်းတဲ့ ဈေးနှုံးနဲ့ ထုတ်လုပ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အပူကနေ လျှပ်စစ် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ လက်ရှိ ဈေးကွက်မှာ သုံးနေတဲ့ စွမ်းရည် အမြင့်ဆုံး ကိရိယာက Rating 0.71 ရှိတဲ့ Sodium-doped lead telluride ခေါ်တဲ့ သတ္တုစပ် တစ်မျိုးပါ။ Lead Telluride ကို Thallium နည်းနည်း ထပ်ပေါင်း ထည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် Rating ကို 1.5 အထိ နှစ်ဆ တိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေ အရ အင်ဂျင်တွေမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိရိယာ အသစ်က 450 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် (230 ဒီဂရီ ဆဲလ်စိယပ်စ်) ခန့်မှာ လက်ရှိ ကိရိယာတွေနဲ့ စွမ်းရည်တူ အပူမှ လျှပ်စစ်ကို ပြောင်းပေးနိုင်တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အပူချိန် ပိုမို မြင့်မားမယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို မြင့်မားတယ်။ 950 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် (500 ဒီဂရီ ဆဲလ်စိယပ်စ်)မှာ သူ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Rating 1.5 ထိရှိပါတယ်။ ပုံမှန်မော်တော်ကား အင်ဂျင်လို စွမ်းအင် စနစ်တွေရဲ့ အပူချိန်သည်လည်း ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် 450 နဲ့ 950 ကြားပါပဲ လို့ ဟာရီမန်စ် က ပြောပါတယ်။
သုတေသီတွေက မူပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားပြီး ဒီပစ္စည်းကို မွမ်းမံ နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေနဲ့ လက်ရှိ တွေ့ရှိမှုတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီပစ္စည်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမို မြှင့်တင် ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည် နေကြတယ်။ ဆနိုက်ဒါက Thallium ဒြပ်စင်ဟာ အရမ်းကို အဆိပ်အတောက် ပြင်းတဲ့ အတွက် ဒီပစ္စည်းကို တပ်ဆင်ထားတဲ့ အပူကနေ လျှပ်စစ်ပြောင်း ကိရိယာကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် သေချာစွာထုပ်ပိုးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိရိယာတွေဟာ ပြန်လည် သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စွမ်းရည်တူ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက် မရှိတဲ့ အပူကနေ လျှပ်စစ် ထုတ်နိုင်တဲ့ တခြား စနစ်မျိုး ထပ်မံ ရှာတွေ့ နိုင်ပါသေးတယ်လို့ လည်း သူက ပြောပြပါတယ်။
my homepage :: com.ar
My homepage: www.isthewinwin.com
Look at my web site :: chatalone.com
thing I normally do! I take pleasure in studyingaput up that can make individuals think. Also, thanks for
Also visit my web site - HTTP://indimusic.tv/
However there is actually just one factor I am not really too comfortable with
and whilst I try to reconcile that with the main
idea of your point, let me see exactly what all the
Visit my web blog http://gonelover.com/wordpress/groups/find-the-best-properties-in-spain-with-the-credible-real-estate-companies
Feel free to visit my web site - http://www.wowfreaks.com
Feel free to visit my weblog: forums.google-scraps.com
Feel free to surf to my site: http://Mocknets.com/blog/view/32692/mccain-spain-blunder-redolent-of-schwarzenegger-spiegel-gaffe
my homepage http://chillzone.gruppoedilcentro.net/index.php?do=/blog/100158/shop-smart-for-tech-products
admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for brand new information.
my website http://elevtv.ro
my blog :: org.uk
There are certainlyawhole lot of details like that
normal inspiration however clearly there are questions like
don?t know if best practices have emerged round things like that, however I am positive that your job
is clearly identified asafair game. Each boys
my site; javea einkaufsmöglichkeiten